Ny iPhone misy 5G dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny 2021 noho ny fiantraikan'ny coronavirus | Vaovao IPhone
Mbola mamoaka vaovao mifandraika amin'ilay coronavirus mahafaly izay nanidy anay tao an-tranontsika nandritra ny andro vitsivitsy indray izahay ary misy vokany eo amin'ny orinasa izany fa tsy eo amin'ny lafiny toekarena ihany, hoy ihany ny mpandinika sasany. hatramin'ny fanombohana vokatra vaovao.
Betsaka ny tsaho milaza fa amin'ity taona ity, Apple dia handefa ny iPhone voalohany mifanentana amin'ireo tambajotra 5G raha toa ka tsy te ho lasibatry ny tsikera na ny mpampiasa na ny haino aman-jery. Ny mpandinika sasany dia milaza fa noho ny fiantraikan'ny coronavirus manerantany, indrindra ny any Chine, Apple dia mety tsy handefa teknolojia 5G amin'ny iPhones amin'ity taona ity.
Ary lazaiko fa io no ho fitsikerana avy amin'ireo mpampiasa sy haino aman-jery maro, satria tsy ny olona rehetra no manova ny iPhone isan-taona. Maro ireo mpampiasa mitazona ny iPhone mandritra ny 2, 3 na 4 taona mihitsy aza. Raha amin'ity taona ity dia tsy mandefa maodely mifanaraka amin'ny tambajotra 5G izy, azo inoana fa maro amin'ireo mpampiasa mikasa hanavao ny iPhone no tsy hanao izany ary miandry ny manaraka.
Mpanadihady iray ao amin'ny Wedbush no nilaza fa:
Apple dia tsy handefa iPhone miaraka amin'ny teknolojia 5G amin'ny taona 2020 noho ny fanakanana ny famatsiana izay ianjadian'ny ankamaroan'ny rojom-pivarotana any Azia ankehitriny, ary ny fandaminana azy dia mbola haharitra volana vitsivitsy, ka tsy hanana fotoana ampy hanatanterahana an'ity puce vaovao ity i Apple raha tsy mihemotra ny fandefasana iPhones vaovao. Ny faharetana sy ny habetsaky ny fiantraikan'ny coronavirus manerana an'izao tontolo izao dia mbola tsy azo ambara mialoha, farafaharatsiny amin'ny toe-javatra ankehitriny.
Manantena ny mpandinika ny hamoahana iPhone mifanentana amin'ireo tambajotra 5G miteraka varotra orinasa firaketana, mitovy amin'ny zavatra niainan'i Apple tamin'ny nanombohany ny iPhone 6 sy iPhone 6 Plus.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 12 » Ny iPhone misy 5G dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny 2021 noho ny fiantraikan'ny coronavirus